कसरी बच्चाहरूको खेलौना क्याटलपलेट बनाउने - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> C hamo hacer >> खेलौना गुलेल
यो सरल कसरी गर्ने भनेर हेरौं बच्चाहरुको क्याटलपल्टको साथ कपडपिन र आइसक्रीम स्टिकहरू प्रयोग गरिन्छ। यो बच्चाहरूको लागि अभिप्रेरित छ। केहि समय खर्च गर्न यसलाई निर्माण गर्न र त्यसपछि सुरु गर्दै विभिन्न प्रकारका प्रोजेक्टल्सहरू।
हामी बच्चाको उमेरमा निर्भर गर्दै इतिहास र युद्धमा क्याटलप्टहरूको बारेमा बिभिन्न अवधारणा र डेटा बुझाउने अवसर लिनेछौं।
२ काठको कपडाको प्यान्स
२ पपसिकल स्टिक्स (चौडा, डाक्टरको जस्तो)
गोंद (यदि सम्भव थर्मल गोंद)
२ रबर ब्यान्ड, कत्ति राम्रो राम्रो
घर-घर क्यापल्ट चरणबद्ध
हामी टेबुलमा काठको काठ राख्दछौं र टिभीजरहरू र दोस्रो स्टिकमा हामी छविमा देख्छौं
एक पटक यो सुख्खा भएपछि हामी क्याप १ सेन्टिमेन्डर दोस्रो स्टिकको अन्त्यबाट टाँस्नेछौं। हामी यस दूरीलाई पछि छोड्छौं यसलाई राम्रोसँग धक्का दिनको लागि। यस तरीकाले हाम्रो औंलाले अझ राम्ररी ग्रिप हुनेछ
सुरूवात गर्न हामीले प्रक्षेपण राख्यौं जुन हामीले स्टोपरमा प्रयोग गर्न लाग्यौं र एक हातले हामीले जमिनमा भएको स्टिक समात्यौं र अर्को हातले हामी त्यसलाई कडा बनायौं र अचानक छोड्छौं।
लचिलो हुँदा यो कसरी खुल्छ हेर्नुहोस्। ऊर्जा different अलग-अलग ठाउँमा स accum्कलन हुन्छ:
क्लैम्प आफैंको मेकानिजममा आफैंले बन्द गर्नुपर्दछ,
लोचदार ब्यान्डमा जो क्लैम्पहरू सँगसँगै समात्दछ
काठको स्टिकको बन्डमा
कुन प्रक्षेपण वा गोला बारुद प्रयोग गर्न
होशियार हुनुहोस् तपाईले के फाल्नुहुन्छ। यदि तपाइँ घरमा हुनुहुन्छ भने, केहि यस्तो चीज प्रयोग गर्नुहोस् जुन तौल नहुने एल्युमिनियम फोइलको बल जत्तिकै तौल गर्दैन। यो आदर्श हो।
यदि तपाईं ढु stones्गा, मार्बल वा यस्तै प्रकारका फाल्न लाग्नुहुन्छ भने, यो खुला स्थानहरूमा हुन दिनुहोस् र कोही पनि यसमा चढ्दैनन्। तपाईले कल्पना गर्न भन्दा धेरै शक्तिशाली फाल्नुहोस्। वास्तवमा यो एउटा मूर्ख सानो खेलौना हो तर यो शक्तिले भरिएको छ। अपेक्षित भन्दा बढी। मलाई मेरो छत बताउनुहोस्।
बायाँमा रबर र केन्द्रमा एकले शक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ, दायाँ तिरको एकले वास्तवमा घटाउछ, तर कसरी मेरी छोरीहरूले राम्रो शट गरे। यदि यो अलि नियन्त्रण बाहिर थिएन भने, यो तपाईं को प्रयास गर्दै सबै कुरा हो।
यो अन्तिम परिणाम हो।
प्रोजेक्टाइलको रूपमा, म एल्युमिनियम पन्नीबाट बनेको बल प्रयोग गर्न चाहन्छु, यद्यपि तपाईं भिन्न वस्तुहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सावधान हुनुहोस् यदि तपाईं संगमरमरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ वा तौलहरू जुन चीजको वजन छ जुन यो देखिन्छ अधिक शक्ति देखिन्छ।
हामी तिनीहरूको उमेर अनुसार के बुझाउन सक्छौं?
क्याटलप्ट्स, घेराबन्दी, ब्यालिस्टिक, प्याराबोलिक शुटि,,
यो एक युद्ध मेसिन हो कि यसलाई एक अस्थिरमा सार्न ऊर्जा भण्डार गर्दछ।
पहिलो क्यापल्टहरू ग्रीकहरूले ईसापूर्व 399 XNUMX। मा आविष्कार गरेका थिए जुन कार्टागिनियाहरूले विकास गरेका थिए र रोमीहरूले यसलाई सिद्ध बनाएका थिए जसलाई घेरामा राखेर विनाशका हतियारहरू बनाएका थिए।
हामीले ब्लगमा केटपल्टहरूको केहि प्रकारको बारेमा कुरा गरेका छौं र म अधिक सामग्रीमा काम गर्दैछु
त्यस पछि तिनीहरू १ centuries औं शताब्दीसम्म सबै शताब्दीहरूमा प्रयोग र परिमार्जन गरिएका छन्। सबै प्रकारका catapults आविष्कार गरिएको छ। तर हामी क्याटाप्ट्सको ईतिहास छोड्ने छौं विशेष लेखको लागि जुन मैले तयारी गरिरहेको छु।
रोमन क्यापल्ट्सले m०० मिटर टाढाबाट kg० किलो ढु stones्गा हान्न सक्दछ।
शुरुआतीहरूको लागि प्रयोगहरू। सम्पादकीय LIBSA
गुफाको कला। विलियम गुर्स्टेल
1 घर-घर क्यापल्ट चरणबद्ध
2 कुन प्रक्षेपण वा गोला बारुद प्रयोग गर्न
3 हामी तिनीहरूको उमेर अनुसार के बुझाउन सक्छौं?
4 क्याटलप्ट्सको बारेमा